महाभारत : प्रेमका आँखाले नि हेरौं - Vishwa News
महाभारत : प्रेमका आँखाले नि हेरौं
म पश्चिम एक नम्बरको ग्रामीण पहाडमा जन्में । अहिले त्यो गाउँ चोकदे, बागेश्वरी हुँदै संघीय नेपालको सूर्यगढी गाउँपालिका भएको छ । सानो छँदा गाउँमा बढो धुमधामले टेलिभिजन भित्रिएको थियो । गाउँ पञ्चायतले नै जोरजाम गरेको । विद्यालयको झ्यालमा राखेर देखाइन्थ्यो । चार गाउँका मान्छे जम्मा हुन्थे । महाभारत आउँथ्यो, रामायण आउँथ्यो । जुन दिन यी हिन्दी धारावाहिक आउँथे त्यो दिन पर्व जस्तै लाग्थ्यो । छिमेकमा वस्तुभाऊ अलि चाँडै खोरमा थुनिन्थे । घाँसदाउरा अलि सम्साँझै सकाइन्थ्यो । चुल्हो अलिक उज्यालैमा जलाइन्थ्यो । किनकि, रामायण वा महाभारत आउने दिन हुन्थ्यो । अलिक टाढाका सहपाठीहरु त्यो दिनको विद्यालय सकिएलगत्तै घर जाँदैनथे, एकैपटक कार्यक्रम हेरेर मात्र फर्कन्थे । टेलिभिजनका दर्शक घर फर्कदा डाँडाडाँडामा ‘राँकेभुत’का लस्कर जस्ता देखिन्थे । टर्चलाइट हल्लिरहेका, बाबियोको मुठोको आगो दन्किरहेको… ।
अर्थात् म त्यो ‘सँस्कृति’बाट आएको हूँ । राजनीति, सत्ता, संघर्ष, प्रेम केही नबुझ्दा नबुझ्दै महाभारतको रस पिउने अवसर सबैले कहाँ पाउनु त्यो बेला दूरदराजको पहाडमा ।
अहिले पनि कहीं शंखध्वनीसहित ‘यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाननिर्भवति भारत’ बज्यो भने दिमागमा त्यही चित्र—दृष्य आउँछ । दिमागमा गडेका केही पात्रको चरित्र र तस्वीर याद आउँछ । त्यो बेला त्यो फगत ‘गीत’ थियो, गीताको चौथो अध्यायबाट लिइएको श्लोक भन्ने के थाहा …! तैपनि घोक्रो फुकाइन्थ्यो, चिच्याइन्थ्यो…!
महाभारत जति पछि भयो उति विराट लाग्ने रहेछ । अलिकति बुझें वा बुझियो कि भन्यो केही पनि बुझिएको नहूँदो रहेछ । यो सन्दर्भ वा प्रसंग चैं गज्जब रहेछ भन्यो त्यो भन्दा अर्को सन्दर्भ झन् गज्जब हुने रहेछ । आजपर्यन्त त्यस्तै लाग्छ ।
यद्यपि, मलाई महाभारतमा प्रेम पनि छ भनेर कसैले पढाएनन् । महाभारतलाई प्रेमले पनि गतिशील बनाएको छ भनेर न कक्षामा गुरुले सिकाए न प्रवचनमा पण्डितले सुनाए । सत्ता, षड्यन्त्र, छलकपट, संघर्ष, शस्त्र, अस्त्रको घेराबाहिर गएर कसैले महाभारतबारे सुनाएनन् औ पढाएनन् । द्वन्द्वको घेराबाट उठेर प्रेमको घेराबाट महाभारतको कहानी किन नसुनाइएको होला ? उसैपनि महाभारतको आदिपर्व दुष्यन्त र शाकुन्तलाको प्रेमले भरिएको छ । यसभित्रै बिराट कृतिहरु लेखिएका छन् । आज यता भन्दा महाभारतमै लाऔं ।
अहिले अनुभव भएको छ, महाभारत युद्धमा जसरी सत्ता र संघर्ष प्रधान हो त्यसैगरी प्रेम पनि प्रधान रहेछ । यसो भनौं, महाभारतको उदय नै प्रेम जराबाट भएको रहेछ ।
केही विमर्श गरौं ।
सत्यवती र ऋषी परासरको प्रेम प्रसङ्ग लिऔं । महर्षी व्यास (वेदव्यास) को जन्म नै परासर ऋषी र माझीकी छोरी सत्यवतीको प्रेम आकर्षणबाट शुरु हुन्छ । उनीहरुबीच शर्तसहित विवाह र सन्तान उत्पादनको प्रक्रिया पूरा भएपछि व्यास जन्मिए । सन्तान उत्पादन भएपछि पनि कुमारित्व कायम गराउने वाचा ऋषी परासरले पूरा गरेपछि मात्र हस्तिनापुरका राजा शान्तनु र सत्यवतीको प्रेम सन्दर्भ आउने हो ।
शान्तनु र गंगाका पुत्र हुन् देवब्रत । देवब्रत शान्तनुलाई कुरुवंश कायम राख्न गंगाबाट प्राप्त सन्तान हुन् । देवब्रतलाई हामी भीष्म भन्छौं जो पहिल्यै हस्तिनापुर युवराज घोषित थिए । तर कालान्तरमा शान्तनु र सत्यवतीबीच प्रेम अंकुरायो । आफ्नै छोरीको गर्भबाट जन्मिएको पुरुष नै हस्तिनापुरको उत्तराधिकारी हुनपर्ने माग सत्यवतीको पिताले राखेपछि आहत भएका शान्तनुलाई चित्त बुझाउन देवब्रत (भीष्म) ले प्रतिज्ञा गरे । सत्यवतीको प्रेममा बेचैन, ब्याकूल प्रेमरोगी पिताका लागि यूवराज पदसहित त्यागेर आजीवन ब्रम्हचर्यको घोषणा नै भीष्मप्रतिज्ञा हो । यही प्रतिज्ञापछि शान्तनु र सत्यवतीको विवाह भयो र महाभारतको डोब खनियो । भीष्मको त्यो प्रतिज्ञा पिताको प्रेम प्राप्तीका लागि उत्सर्ग थियो, बलिदान थियो भनेर मलाई किन कसैले नपढाएका होलान् ?
अम्बा र शाल्वबीचको प्रेम कहानीले पूर्णता पाएको भए महाभारतमा भीष्मको पराजय कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? उनै भीष्मले स्वयम्वर समारोहबाट अपहरण गरेका थिए तीन कन्या अम्बा, अम्बिका र अम्बालिका । अम्बिका र अम्बालिका त हस्तिनापुरका बुहारी भए तर अम्बाले शाल्वसँगको आफ्नो प्रेमका खातिर सबैखाले बिद्रोह गरिन् । यही प्रेम—द्वन्द्वले परशुराम र भीष्मबीच अनिर्णित तर भयंकर युद्ध भयो । अन्ततः पुनर्जन्ममा भीष्मको मृत्युको कारण बन्ने बरदान प्राप्त गरेर अम्बाले देहत्याग गरिन् । यहींबाट शिखण्डीको उदय र भीष्मको पतनको कथा शुरु हुन्छ । सबैलाई थाहा छ भीष्मको पतनविना महाभारतको अन्त्य सम्भव छैन । अर्थात् अम्बा महाभारतको शुरुदेखि आखिरीसम्म छिन् । प्रेमका खातिर अम्बाले गरेको बिद्रोह महाभारतको अर्को कडी हो भनेर मलाई किन पण्डितहरुले नसुनाएका होलान् ?
महाभारतमा द्रौपदी केन्द्रिय चरित्र हुन् । खासमा द्रौपदीले पाञ्चाल नरेशको दवावमा कर्णप्रतिको आशक्तिलाई घृणामा रुपान्तरण गरेको भेटिन्छ । यही घृणाले महाभारतमा चिरहरणको बीज रोप्छ । जसरी द्रौपदी कर्णप्रति आकर्षित थिइन् उस्तै चरित्र कर्णको पनि भेटिन्छ । भीष्मसँगको संवादमा कर्णले द्रौपदीसँग आजीवन प्रेम गरेको स्वीकार गरेका छन् । हामीलाई चाँहि कर्ण र द्रौपदी सधैं विपरीत ध्रुवमा उभ्याएर प्रस्तुत गरियो । किन होला ?
महाभारतमै बिदर्भकी राजकुमारी रुक्मिणीको विवाह शिशुपालसँग हुने भएपछि कृष्णले अपहरण गरेर भित्र्याएको अर्को प्रेमकथा छ । दुर्योधनसँग बहिनीको विवाह होस् भन्ने चाहने बलरामको इच्छाविरुद्ध कृष्णले अर्जुनलाई उक्साएर शुभद्राको अपहरण गराई बिवाह गराईदिएको अर्को प्रेम सन्दर्भ छ । हिडिम्बाको बिद्रोह र भीमसँगको प्रेम रतीरागको अर्को कहानी छ । नागकन्याका रुपमा उलुपीले गरेको अर्जुनको अपहरण र प्रेमको अर्कै कहानी छ । कृष्णपुत्र साम्ब र दुयोधनपुत्री लक्ष्मणाबीचको प्रेम र भागी बिवाहकै कारण हस्तिनापुर र द्वारिकाबीच युद्धै भएका छन् । हामीलाई चाँहि युद्धैयुद्ध मात्र पढाइयो, सत्ता संघर्षका रुपबारे मात्र घोकाइयो । प्रेमबारे नपढाइएको किन होला ?
शकुनी ः भन्नासाथ छल, कपट र षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ । शकुनी आफैंमा बिम्ब जस्ता, प्रतीक जस्ता लाग्छन् । शकुनी मामा—भाञ्जा प्रेमको पनि पर्याय छन् । महाभारतको कडी बनाउन र जोड्न सिद्धहस्त कालीगढझैं लाग्छन् शकुनी । कौरव र पाण्डवबीच महाभारतको सेतु बनाउने काम नै शकुनीको भाञ्जा अर्थात् दुर्योधन प्रेममा देखिन्छ । यस्तो देखिन्छ मानौं दुर्योधनका सबै कृत्य, कु—कृत्यको समर्थन गर्नु नै शकुनीको धर्म हो । बाहिरबाट हेर्दा शकुनीले कौरवका सय भाईको अभिभावकत्व लिएकै देखिन्छ । तर तथ्य के पनि हो भने शकुनीका माता, पितालगायतका परिवार धृतराष्ट्रकै हस्तिनापुरको जेलमा भोकभोकै सडेर मारिएका थिए । मर्नुअघि आफ्नो बाबु (सुबाल)को अन्तिम इच्छाको रुपमा शकुनीले धृतराष्ट्रबाट जीवनदान पाएका थिए । जेलबाट निस्किएपछि हस्तिनापुरमै रहेर शकुनीले सय भाई कौरवको मन जिते । दुर्योधनका प्रिय मामा बने । भाञ्जा प्रेमको आवरणमा शकुनीले चालेका हरेक चाल कौरवको वीपक्षमा जाँदाजाँदा महाभारत भएकै हो । यसर्थ, कौरवको विनाश खासमा शकुनीको बदलाभावको खेती पनि थियो । भनिन्छ नि, समस्याको समाधान यसमा पनि निर्भर गर्दछ कि हामीलाई सल्लाह कसले दिइरहेको छ । जस्तो कौरव उर्फ दुर्योधन शकुनीको सल्लाह लिइरहेका थिए यता पाण्डव कृष्णको ।
महाभारतमा दुर्योधन र कर्णबीचको मित्रताको वा मित्रप्रेमबारे कमै पढाइन्छ । गुरु द्रोणाचार्यले अर्जुनप्रति गरेको एकपक्षी प्रेमले गराएको वास्तविक कर्णको जन्म प्रसंग कम रुचिपूर्ण छैन । घृणा र भेदभावको शिकार कर्णप्रति दुर्योधनले दर्शाएको प्रेम र सम्मानको बलमा महाभारतमा नयाँनयाँ अध्याय थपिएका छन् । अझ बढी त धृतराष्ट्रको पुत्रप्रेम पनि महाभारतको जड हो । पतिप्रेमका खातिर गान्धारी र पुत्रप्रेमका खातिर धृतराष्ट्रको उदाहरण सबैलाई थाहा छ । यी सबैलाई सत्तासँग भन्दा प्रेमसँग तुलना किन कम भएको होला ?
बाँकि दर्जनौं प्रेम दृष्टान्त उल्लेख गर्न अर्को महाभारत लेखिनपर्छ जुन सम्भव छैन ।
मेसीको ह्याट्रिकमा बार्सिलोनाको रवाफिलो जीत